Airtel sy Baobab+: herinaratra ho an’ny tokantrano iray tapitrisa | NewsMada
Airtel sy Baobab+: herinaratra ho an’ny tokantrano iray tapitrisa
Nampahafantarina, omaly tao amin’ny foiben’ny Airtel, ny tolotra Izili, famatsiana angovo avy amin’ny masoandro, fiaraha-miasan’ny Airtel sy ny Baobab+. Satria mbola ambany loatra ny tahan’ny tokantrano mahazo famatsiana herinaratra, tsy misy afa-tsy 15 %, miditra amin’izany sehatra izany ny Baobab+ manome tolotra hahazoan’ny tokantrano maro, indrindra ny any ambanivohitra, ny fitaovana hahazoana herinaratra. Misy karazany izany, araka izay zakan’ny fahefa-mividy, ary azo aloa tsikelikely amin’ny alalan’ny Airtel Money, 12 hatramin’ny 24 volana. Tanjona amin’izao fanapariahana ny tolotra izao ny hananan’ny tokantrano iray tapitrisa herinaratra.
Hatramin’ny 2016 nisian’ny Baobab+, tokantrano 60 000 efa mampiasa izany amina faritra maro, ka ny 1/3 amin’ireo mandoa ny vidiny tsikelikely, araka izay fifanarahana. « Azo aloa 1000 Ar isan’andro, isan-kerinandro, isam-bolana ny vidiny, an’ny tompony tanteraka ny fitaovana rehefa voaloa. Ny labozia sy ny solitany anefa mety handaniana 1000 ariary isan’andro mandrakizay », hoy Ranarijesy Joel, talen’ny varotra ao amin’ny Baobab+. Hafa ny vidin’ny fitaovana raha atao indray mandoa, miankina amin’ny fahefa-mividin’ny tsirairay kosa ny zanabola alaina raha aloa tsikelikely.
Fandraisana anjara iray amin’ny fampandrosoana ny firenena izao ataon’ny Airtel izao, manaiky ny fiaraha-miasa ho an’ity tetikasa famatsiana herinaratra ity.”Manampy ny olona amin’ny asa ataony izao fitaovana famatsiana herinaratra izao, afahany mijanona amin’ny tambajotra Airtel mifandray amin’ny rehetra”, hoy ny tale jeneralin’ny Airtel, i Eddy Kapuku. Mitombo izany ny mpandraharaha tsy miankina miditra amin’ny famatsiana herinaratra, ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe.